Izinhlu Zokungena Kokubili | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » Izinhlu Zokungena Kokubili
Siphinde saphendukela kumngani uSeth Godin nemvume yakhe yokumaketha: into yokuqala okufanele uyenze ukuthola ukuthi imikhankaso yakho ifike ukucela imvume kumuntu ukuze ubathumele ama-imeyili. Futhi ngalokho kufanele usebenzisane nakho amafomu wokungena kabili .
Lokhu kusho ukuthi obhalisile kumele aqinisekise ukuthi uyakwamukela ukuthunyelwa. Ngemuva kokubeka imininingwane yakho efomini, uzothola i-imeyili lapho kufanele qinisekisa ukusebenza kwensiza . Uma umsebenzisi engenzi lesi siqinisekiso sokugcina, imininingwane yabo izoba kuseva yakho kepha izosebenza. Ama-imeyili ngeke akufinyelele.
Futhi uma ngabe unemibuzo, uyacelwa ngokomthetho ukuthi usebenzise amafomu wokungena kabili.
I-2. Isifinyezo esiphansi ngokuchofoza kwe-1
Leli phuzu libaluleke kakhulu ngoba kufanele kube sobala ukuthi awunandaba nokugcina ama-imeyili we-150,000. Akukona ngobungako kepha ikhwalithi.
Ukuba nabantu abangenantshisekelo ezinhlelweni zakho noma imikhiqizo ohlwini lwakho akusizi. Yebo yebo, ukulahlekelwa imali ngesoftware yakho yokuthengisa ye-imeyili.
Kuhle ukuvumela abantu bahambe kalula. Hlanganisa kuwo wonke ama-imeyili akho isixhumanisi ukuze ukwenze ngokuchofoza okukodwa.
Imvamisa le nketho isivele inikwe amandla futhi ivela ekugcineni kweMeilChimp nemiyalezo yenkampani nezifanekiso. Ungayikhumuli
Ukugwema ukuwela kokuhlunga kogaxekile kufanele futhi unake isikhathi sokuthumela. Ngaphezu kwalokho, ayinangqondo ukuthi uthumela i-imeyili yakho ku-1 noma i-2 ekuseni ngaphandle kokuthi ufuna ukufunda isikhova.
Ukuthumela ama-imeyili ngamahora angajwayelekile kunzima kakhulu kokuhlunga kogaxekile, ngakho-ke kungenzeka kakhulu ukuthi ugcina kufolda ogaxekile.
Zama ukuthumela imikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyili esimisweni esijwayelekile noma esingaphansi. Futhi ngokujwayelekile ngiqonde kusuka ku-6 ekuseni kuze kube yi-8 ntambama.
Woza, unesikhathi esiningi.
I-4. Bukela ulimi lwezindaba zakho
Kunamagama ongeke uwasebenzise nganoma iyiphi indlela . Enye yazo “imahhala” kanti enye “ngocansi”. Lawa magama e-2 enza noma iyiphi i-choreo igcina kudoti ngokuzenzakalelayo.
Qaphela futhi nokusetshenziswa kwezinhlamvu ezinkulu ngamanye amagama esihloko se-imeyili. Lokhu futhi kuwumkhuba omubi, zama ukungakwenzi.
I-5. Sebenzisa umhlinzeki wokuthengisa we-imeyili onedumela elingenasici
Ukuhlunga okungogaxekile kuhlaziya idumela le-IP noma isizinda lapho kuthunyelwa khona i-imeyili noma incwadi yezindaba.
Ngakho-ke, ngincomela ukuthi usebenzise kuphela amapulatifomu athembekile wokuthengisa ama-imeyili. Ngaso sonke isikhathi ngincoma abafundi bami ukuthi basebenzise iMailchimp, kepha kukhona nezinye izinketho ezinhle njengoku:
Ngaphezu kokuba nezici eziningi, enye yezinto ezihehayo zalezi zingxenyekazi idumela lazo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ama-imeyili owathumelayo azohanjiswa kubamukeli bawo .
← Ungasakha kanjani isu lakho lokuMaketha le-imeyili
Ungayibhala kanjani i-imeyili evulekile futhi ifundwe →